ချကုန်ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ချကုန်ပြီ
Posted by chityimhtoo on Jun 3, 2012 in News | 27 comments
သံတွဲမှ ရန်ကုန်သို့ ထွက်ခွာလာသော ရိုးမသစ္စာ ခရီးသည်တင်ယာဉ်အား တောင်ကုတ် – သံတွဲ လမ်းဆုံးတွင် ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုးများက တားဆီးကာ ကားပေါ်တွင် လိုက်ပါလာသည့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ဆယ်ဦးခန့်ကို ကားပေါ်မှ ဆွဲချ၍ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ယနေ့ညနေ ၅ နာရီခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများ၏ ဆက်သွယ် ပြောကြားချက်အရ သိရှိရသည်။
လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်အတွင်းက ရခိုင်ပြည်နယ် ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကျောက်နီမော် ဒေသခံ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦးကို အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် သုံးဦးက မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းကြောင်း ယခုကဲ့သို့ လက်တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း တောင်ကုတ် ဒေသခံအချို့က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရိုးမသစ္စာ ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်း ရန်ကုန်ရုံးသို့ အတည်ပြု ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့ရာ ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားသည်မှာ မှန်ကန်သော်လည်း အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်နေသဖြင့် သေဆုံးသူ ဦးရေနှင့် ပတ်သက်၍ အတည်ပြု ပြောကြားနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ပြန်လည် ဖြေကြားသည်။
ဘယလိုဘဲဖြစ်ဖြစ် မှန်ကန်တဲ့ တရားဥပဒေနဲ့အညီ ဖြေရှင်းတာမျိုး က ပိုကောင်းတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
တကယ်က တရားဥပဒေအတိုင်း ဘက်မလိုက် ငွေမစား ပဲ တိတိကျကျ စီရင်ဘို့သာ တွန်းအားပေးရမှာ..။
ကမ္ဘာမှာ မြန်မာတွေ နာမည်ပျက်တာပဲရှိတယ်။
ကုလားလူမျိုး တရုတ်လူမျိုး ကိုမဟုတ်ဘူး
မကောင်းတဲ့သူ (လူဆိုး) ဆိုရင် ဘာဘာသာ ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ် ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရမှာ..။
ဦးပါ ပြောတာ အမှန်ကန်ဆုံးပါ ။ လေးစားပါ၏
( ရှေ့ပို့စ်မှာဖရဲမ ရဲ့ကော်မန်း ကပိုပြည့်စုံလို့ပြောင်းပေးလိုက်တာပါ)
ယနေ့ ၃ ရက်နေ့ ညနေနေ့လည်ပိုင်းက သံတွဲမြို့ကနေ ရန်ကုန်ကို ထွက်ခွာလာသော ရိုးမသစ္စာအဝေးပြေးကားသည် တောင်ကုတ်မြို့သို့အရောက်တွင် တောင်ကုတ်မြို့သူမြို့သား ရခိုင်လူမျိုးများက တားဆီးကာ ကားပေါ်တွင်လိုက်ပါလာသော မွတ်ဆလင်လူမျိုး ရှစ်ဦးကို ကားပေါ်မှဆွဲချ၍ သတ်ပစ်လိုက်ကြကြောင်း ယခုပင် သတင်းရရှိပါသည်။
ကျောက်နီမော်မှ မသီတာထွေးအား လူမျိုးခြားသုံးဦးက မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့မှု ၏ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးတရားများမှ ယခုအခါ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းပုံစံ များသို့ ကူးပြောင်းလာနေခဲ့သည်။ တောင်ကုတ်မြို့နယ်မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ ကျောက်ဖြူမြို့သို့ လုံခြုံရေးယူရာ ထွက်ခွာသွားကြချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ သတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ မသီတာထွေးအမှုမှ တရားခံသုံးဦးကို ကျောက်ဖြူမြို့တွင်ထားရှိသဖြင့် ရခိုင်ပြည် မြို့နယ်၊ ကျေးရွာများမှ ပြည်သူများက ကျောက်ဖြူမြို့သို့ သွားရောက်ကာ ဆန္ဒပြအုံကြွမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားများ စေလွှတ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
တောင်ကုတ်မြို့မှ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦးက တောင်ကုတ်ရှိ စစ်တပ်သို့အကြောင်းကြားရာ တပ်ရင်းမှူးက မြို့ပြစံမံအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စမှာ ယင်းနှင့်မဆိုင်ပါကြောင်း ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ယခုတွင် အသတ်ခံရသူ မွတ်ဆလင် ၈ ဦး၏ အလောင်းများကို တောင်ကုတ်၊ ညဈေးရှေ့တွင် စုပုံထားသည်ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ဖုန်းဖြင့်အကြောင်းကြားသည်။
စစ်တွေမှာလည်း ဆန္ဒပြတာကို ရဲတွေက အစက
မိုးပေါ်ထောင်ပစ်တာ…..နောက်တော့ လူအုပ်ထဲကို ဗျင်းထည့်တာ
တစ်ယောက်ဆို ခြေမျက်စိဆုံပွင့်သွားတာ ခြေပြတ်ကြီး
နောက်ဆုံးတော့လည်း တန်ရာ တန်ရာဘဲ ရကြတာပါဘဲ ..
The Voice Weekly က သတင်းပါ. http://www.facebook.com/thevoiceweekly
လူသတ်မှုဖော်ထုတ်ပေးရန်တောင်းဆိုရာမှ စစ်တွေရဲစခန်းရှေ့ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား
စစ်တွေမြို့အနီး နာဇီကျေးရွာ မှအမျိုးသားတစ်ဦး အသတ်ခံရ သည်ဟုယူဆရသောအမှုအား ဖော်ထုတ်ပေးရန်စစ်တွေမြို့အမှတ်(၁)ရဲစခန်းတွင် မြို့ခံများဝိုင်းဝန်းတောင်း ဆိုရာမှ တဖြည်းဖြည်းလူများလာပြီ လူုစုကွဲစေရန်အတွက် အဆိုပါရဲစခန်းရှိ ရဲများမှသေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း စစ်တွေမြို့ခံတစ်ဦးက The Voice Weekly သို့ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုမှာ ဇွန်လ၃ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီအချိန်တွင် စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကဆက်လက်ပြောကြားသည်။
“ပထမတော့မိုးပေါ်ထောင် ပစ်တယ် ။နောက်တော့လူအုပ်ကြီးထဲပစ်တယ် ။အချက်လေးဆယ် လောက်ရှိတယ် ပစ်တာ” ဟု အဆိုပါ The Voice Weekly သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုသည်။
ထိုသို့စစ်တွေအမှတ် (၁)ရဲစခန်းမှ လူစုခွဲစေရန် လူအုပ် အတွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် စစ်တွေ့မြို့ ခံငါးဦးထိ မှန်ကာနှစ်ဦးမှာဦးခေါင်း နှင့် ၀မ်းဗိုက် သို့ထိမှန်ခဲ့ပြီး စစ်တွေဆေးရုံအရေးပေါ် ကုသဆောင် သို့ပို့ဆောင် ထားရပြီး သုံးဦးမှာ ခြေထောက်သို့ထိမှန်ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာရဲစခန်း အနီးသို့ရောက်ရှိနေသည့် စစ်တွေမြို့ခံတစ်ဦးကပြောကြားသည်။
ယနေု့ညတစ်နာရီခွဲ အချိန်တွင် The Voice Weekly က စစ်တွေမြို့ သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ပစ်ခတ်မှု များဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး စစ်တွေမြိုခံများမှ ရဲစခန်း သို့ဝိုင်းထားကြောင်း ။ရဲများက မျက်ရည်ယိုဗုံး များ ။သေနတ်များဖြင့်ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်လျက်ရှိကြောင်း စစ်တွေမြို့ခံများကဆိုသည်။
“တမြို့လုံးဗြောင်းဆန်နေပြီအိမ်တွေကိုပါ သေနတ်ထိတယ်။အပေါ်ထပ်တွေ ထိတယ်”ဟုစစ်တွေ မြို့တွင်သီတင်းသုံးလျက်ရှိသောရဟန်းတစ်ပါးကမိန့်ကြားသည်။
နောက်ဆုံးဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်များအရ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဖွံဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဌဒေါက် အေးမောင် အပါအ၀င်ပါတီဝင်ငါးဦးနှင့်ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှုးကြီးထိန်လင်းတို့ အဆိုပါရဲစခန်းသို့ သွားရောက်ညှိနိူင်းမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း စစ်တွေမြို့ဒေသခံ များကဆိုသည်။
7 Day News Journal သတင်းပါ.http://www.facebook.com/7daynews
စစ်တွေမြို့တွင် ရခိုင်အမျိုးသားတစ်ဦးအသတ်ခံရသည်ဟူသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တွေမြို့ခံများက အမှတ်(၁) ရဲစခန်းရှေ့သို့စုရုံးကာ ၀ိုင်းဝန်းတောင်းဆိုလျှက်ရှိပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က သေနတ်များပစ်ဖောက်၍
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနေထိုင်ကြသည့် စစ်တွေရှိ နာဇီကျေးရွာတွင် ရခိုင်အမျိုးသားတစ်ဦးအသတ်ခံရသည်ဟု မြို့ခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားများက အရေးယူပေးရန် ရဲစခန်းတွင် တောင်းဆိုနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
တောင်းဆိုမှုများကို ၃ ရက်နေ့ ညနေငါးနာရီခန့်ကတည်းက စတင်နေကြခြင်းဖြစ်ပြီး ည ၁၁ နာရီခွဲခန့်အချိန်တွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်တောင်း ဆိုနေသူများအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သေနတ်များကိုမိုးပေါ်သို့ ပစ်ဖောက် လူစုခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လူစုခွဲသည့်အနေဖြင့် သေနတ်များပစ်ဖောက်သော်လည်း တောင်းဆိုသူများမှာ ရဲစခန်းရှေ့တွင်ပင် ဆက်လက်စုရုံးနေကြဆဲဖြစ်သည်ဟု စစ်တွေမြို့ခံ တစ်ဦးက ဖုန်းဖြင့်ပြောသည်။
Eleven Media Group http://www.facebook.com/ElevenMediaGroup
စစ်တွေမြို့ရှိ နာဇီဈေးကို အစိုးရက ပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့ပြီး ဈေးကောက်ကောက်ခံရန်အတွက် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အား ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သဖြင့် ဈေးသူဈေးသားတစ်ဦးက ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့က ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ရာ ပုဂ္ဂလိကအုပ်စုတစ်စုမှ ဖမ်းဆီးခဲ့သဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများမှ ဖမ်းဆီး ခံရသူအား ပြန်လည်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ည ၁၁နာရီခန့်တွင် ရဲစခန်းအား ခဲများဖြင့် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ရဲစခန်းမှလည်း ခဲများဖြင့် ပြန်လည်ဖြစ်ခဲ့ကာ ည ၁၁ နာရီကျော်တွင် သေနတ်များဖြင့် ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းပစ်ခတ်မှု ကြောင့် စစ်တွေပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ၇ ဦး တက်ရောက် ကုသမှု ခံယူနေရပြီး ဒါဏ်ရာ အပြင်းအထန်ရရှိသူများလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
မလိုလား အပ်တဲ့ လူမျိုးရေး အဓိကရုံး တွေ ဖြစ်မှ စိုးရိမ်မိပါတယ်…..
ပြသနာ တက်တာတော့ မကောင်းဘူး။
ရခိုင် လူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း လေးစားပါတယ်။
ရခိုင်လူမျိုးတွေ ဒီလောက် ၀ိုင်းရံပြီး စည်းရိုးသဖွယ် နေပေးတာတောင် မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ နေ့စဉ် တိုးပွားများပြားနေပါတယ်။ ဒီထက် မမြန်အောင် တားဆီးပေးတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးများလည်း ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။
တရုတ်တွေ ကုလားတွေ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ နေထိုင်နေကြတာ နှစ်တွေ ကြာလှပါပြီ။ မျိုးဆက် ၁ဆက် မက ၂ဆက် နေထိုင်ပြီးတဲ့ တရုတ်တွေ ကုလားတွေ ကတော့ မြန်မာလူမျိုး တပိုင်း ဖြစ်နေသလိုမျိုး လိုက်ရောညီထွေ နေတတ်နေတာတွေ တွေ့မိပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ၀င်လာတဲ့ တရုတ်တွေ ကုလားတွေကတော့ လိုက်ရောညီထွေအောင် မနေတတ်ပဲ တသီးတသန့် လုပ်တာတွေကတော့ မြင်ရတာ သိပ်သဘောမကျလှဘူး။
မြန်မာပြည်မှာနေ မြန်မာရေသောက်ပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေကို မတူသလို မတန်သလို ခွဲခြား ဆက်ဆံမှုတွေ တခြား တပါးက ယူလာတဲ့ အယူသီးမှုတွေ အစွဲကြီးမှုတွေကို မြန်မာလူထု ထဲကိုပါ သိမ်းသွင်း ထိုးဖောက်ဖို့ ကြိုးစားတာတွေကိုမြင်ရကြားရတော့ မြန်မာပြည်မှာနေ မြန်မာရေသောက်နေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရင်နာဖို့လည်း ကောင်းလှပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးကြားထဲမှာ နေပြီး မြန်မာတပိုင်း ဖြစ်နေတဲ့ ကုလားတွေ ကလည်း အဲဒီ ကုလားတွေကို ၀ိုင်းရံနေပေးမဲ့အစား သူတို့ရဲ့ မတူညီတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို တူညီလာအောင် ညှိနိုင်းပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အခု ရခိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့ ပြသနာက အစိုးရ ကိုင်တွယ်မှု ညံ့ဖျင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့သာ မြင်မိပါတယ်။
တရားခံ အစစ် ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးလို့ သိတယ် ဆိုရင် တရားဥပဒေ အရ ကျောသား ရင်သား မခွဲခြားပဲ လူထု ကျေနပ်အောင် စီရင်ပေးသင့်တယ်။
ရခိုင်မှ အသွေးအသားရှိတာ မဟုတ်သလို ကုလားမှ အသွေးအသား ရှိတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
အသွေးအသား ရှိသူတိုင်း အသားနာအောင် လုပ်ရင်တော့ နာကြမှာပါပဲ။
သူများကို နာအောင် လုပ်ရင်တော့ ကိုယ်လည်း နာအောင် တရားဥပဒေက စီရင်ပေးမယ် ဆိုတာကို သိသွားအောင် လူထု အတွက် တရားဥပဒေက မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးဖို့ သင့်တယ် ထင်ပါတယ်။
အချိန် ထပ်ကြာမယ် ဆိုရင်တော့ လူမျိုး အရေး ဖြစ်ပြီး နေရာတိုင်းမှာ လူသတ်မှုတွေ ဖြစ်ကုန်တော့မယ်။
မည်သူ တဦး တယောက်ကိုမှ တရားမဲ့ မသေစေချင် မနာကျင်စေချင်ပါဘူး။
တရားသော ဥပဒေ တည်မြဲပြီး တရားဥပဒေ အထက်မှာ မည်သူမှ မရှိပဲ တည်တံ့ပါစေ။
မွေးရာပါ သံသယများတဲ့ ရောဂါစွဲလာသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ .. ကျွန်မမြင်မိတာကတော့ … ဒီလိုလုပ်တာ … ရခိုင်တွေဟုတ်ပါ့မလား … ကြားထဲက … တစ်ခုခုကများ …. ကုလား ဗမာ အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်အောင် .. တဖက်လှည့်နဲ့ လှုံ့ဆော်တာများလားလို့ .. ကြံဖန်တွေးမိပါတယ် … ။ (အထင်နော်)
ဒီလို … ကားကိုစီးပြီး … လက်ရဲဇတ်ရဲလုပ်တတ်ကြတာ .. သာမန်လူတွေမှာ … ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲကိစ္စလို့ မြင်မိပါတယ် …. ။ အသတ်ခံရသူရဲ့ .. မိသားစုနဲ့ ဆွေမျိုးများထဲမှာတောင် .. စိတ်ဆိုး၊ဒေါသထွက်မကျေနပ်ပေမယ့်.. ဒီလို လုပ်ရဲတဲ့ လူ .. ၊ သွေးဆူတဲ့လူ … အုပ်စုလိုက်ရှိပါ့မလားဆိုတာကတော့ … စဉ်းစားစရာမို့လို့ပါပဲ …… ။
“Inademocracy, people get the government they deserve,”
တရားဥပဒေကိုကျော်ပြီး….ဘာမှမဆိုင်တဲ့ လူတွေကိုသတ်လိုက်တာကို မှားတယ်လို့ထင်တာပဲ။
၂၉-၅-၂၀၁၂နှစ် ည၁၀ နာရီအချိန်တွင်မြန်မာန်မာနယ်စပ်နစ်မြစ်အနောက်ဖက်ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်…ငံ မြစ်နားရွာ။ခြံချောင်းအနီး ၀ါးခွတ်ချောင်းအင်တော်လီ
ရခိုင့်အမျိုးသားရေး နိုင်နိုင်See more
by: Yote Thayyote
နိင်ငံရေး၊ဘာသာရေး၊လူမျိုးရေး၊လူမူ့ရေး ခွဲခြားနားမလည်အောင် လုပ်ထားသူက ခွပ်ခိုင်းတိုင်း ခွပ်နေကြရင် commander စားသွားမယ် သတိထားပြီး နေပေးကြပါ။ (၀၉၅၀ ၈၂၈၀၈)
အသက်တစ်ရာ မနေကြရ ၊ အမှု တစ်ရာကြုံနေကြရတဲ့ အဖြစ်ပါလား ။
kk tin says:
လုပ်ကြ.လုပ်ကြ .ဒီတခါတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ပေါ့.
ma etone လိုပဲ အဲဒီလောက်ရိုးတဲ. အဖြစ်အပျက်လို.မထင်မိဘူး။ (ကျွန်တော်လဲ အထင်နော်)။ လိုချင်တဲ.ပုံစံထဲ ၀င်ကုန်ကြတာလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရှေ.တိုးခါနီး နောက်ပြန်လှည်.နေတဲ. အဖြစ်မျိုးတော. မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။
အရမ်းလွယ်တယ်.အိုးမဲလေး သုတ်ပေးလိုက်တာနဲ့.ခွတ်လိုက်ကြတာ.. တဖုံးဖုံးနဲ့ နဲ့ အုံးအုံးထနေတာပဲ.
တော်တော်စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်.လူမျိုးရေး အ ဓိကရုန်းဖြစ်အောင် တစုံတရာကတွန်းပို့ နေသလိုပါပဲ.
တောင်ကုတ်ဟာ အ စကတည်း က မွတ်ဆလင် တွေကိုလက်မခံတဲ့ မြို့ ပါ. ကျေက်ပန်းတောင်း လိုပဲ ဗလီဆောက် လို့ လဲ မရ ပါဘူး.သူနဲ့နီးတဲ့ သံတွဲမှာ ဗလီရှိပေမဲ့ တောင်ကုတ်မှာ မရှိပါဘုး ။ အဲဒီလောက် မွတ်ဆလင်ဘာသာ ရဲ့ လွမ်းမိုး မှုကိုကြံကြံခံထားတဲ့မြို့ လေးပါ။ လ ၀က တွေတား ၇က်နဲ့ အဲဒီကား က ဘာ လို့ သံတွဲက နေထွက်သွား ရ တာလဲ။မူဆလင် ကို အ ရမ်းမုန်းတီး နေတဲ့ မြို့ မှာ ဘာ ကြောင့် ကားေ ပ်ါကဆင်း ပြီး ၀တ် ပြု ရ တာ လဲ။အဲဒီအ ပြု အမူ တွေ ဟာ ဒေါသ ထွက်နေတဲ့ လူအုပ် ကြီး ရဲ့ ဒေါသ ကိုဆွ ပေး နေသလိုပဲ.ဦး ဖေါရေးတဲ့ ပို့စ် တခု မှာ ဖတ် ရသလို သြစီ မှာ ဗလီဆောက်သလို များ လား.
ခုတော့သေတဲ့ သူက သေကုန် ပြီ .တရား ဥပဒေ အ တိုင်း မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်ပါစေလို့ ပဲဆုတောင်း ရမှာပဲ.ရခိုင်သားတွေကလည်း အကြမ်းဖက်မှုတွေ ထပ်မဖြစ်အောင် ငြိမ်း ချမ်းသောနည်း လမ်း နဲ့ ပဲ အ ဖြေရှာ သင့် ပါတယ်. ခုတော့လူတစုရဲ့ ဒေါသတွေကြောင့် ဘယ်လိုမှလူတွေ လက်မခံနိုင်စရာ မရှိတဲ့အကြမ်း ဖက်မှု ကြီး ဖြစ်သွား ပြီ။ကြက်ကလေး၊ငှက်ကလေးကို သတ်သလိုလွယ်လှပါလား ( ကလေးများ မကြည့်ရ)ဆိုတဲ့ မှကော့မက် ပိတ် ထားလို ဒီပို့စ် မှာ လာ မန့် ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်.မဆိုင်ရင်လဲ ခွင့် လွတ်ပါ။နောက် fB မှာ မန့် ထားတာလေး တခုကိုလဲ ကူး ပြီး တင် လိုက်ပါ တယ်
Kaung Khant Kyaw Nainai Tun ကျနော်ရတဲ့ သတင်းတခုကိုပြောမယ်။ ဒီအထဲမှာ အသတ်ခံလိုက်ရတဲံ့ မော်လဝီဆရာဆိုသူတွေဟု ကျောက်ထရံရွာက လူသတ်မုဒိန်းကောင်တွေရဲ့ မိသားစုတွေကို သွားတွေ့လာတာလို့ သတင်းရထားတယ်။ အတိအကျတော့မသိသေးဘူး။ အဓိကတော့ မုဒိန်းကောင်တွေ မိသားစုကို လာထောက်ပံ့သွားတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဆုချတယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီသတင်းကို ရလို့ တောင်ကုတ်သားတွေက စောင့်ပီး သတ်ကြတယ်လို့ ကြားရတယ်ဗျ။
ကြက်ငှက်သတ်သလို ရခိုင်မလေး အသတ်ခံရတာတော့ မပြောကြဘူလား၊ ရခိုင်နာမည်ယူ၊ ငါးပါးသီလ ရှင်းပြပြီးpost တင်လို့ အဟုတ်အောက်မေ့ပြီး ကြည့်နေတာ၊ လှူံ့ ဆော်တယ်မထင်အောင်လုပ်တဲ့ ကုလားကျင့်ကုလားကြံ။ အောက်ဘက်ကျ ဗမာ ဟန်ဆောင် ဗမာအပေါ်ရခိုင်အထင်မှားအောင် ဝင်မန့်တဲ့ ကုလားကရှိသေး၊ ပြီးတော့ဗုဒ္ဒဘာသာယောင်ယောင် ဗုဒ္ဒဘာသာမှာ ဒီလိုလုပ်တဲ့သူရှိလို့သိက္ခာကျ သယောင်ရေးသေး(အဲဒီ post အောက်မှာသွားဖတ်ကြည့်ပါ။ )တောင်ကုတ်မှာ သူတို့နေမရလို့ မြို့ပျောက်သွားမယ်ဘာညာနဲ့ ကြိမ်းလိုက်ကြတာ၊
တခြားမြို့သွား၊ ကားရပ်ပြီး ဖင်ဘူးတောင်း ထောင်ပြရင် လဲလုပ်မှာပဲ၊ ဗုဒ္ဒ ဘာသာကို စော်ကားနိုင်လို့ ဆုကြေးပေးပြန်လာတဲ့မော်လဝီဆရာတွေပ၊ဲ(ဘာတဲ့၊၈ ယောက်ကတရားကျင့်နေတာတဲ့ ၊သနားအောင်မန့်ထားသေး)သူတို့ဘာသာမှာ ဘာသာမတူတဲ့မိန်းကလေးကိုယူနိုင်ရင်၊မတူတဲ့သူကို သတ်ဖြတ်နိုင်ရင် ထောက်ပံ့ကြေး(ဆုကြေး)ပေးတာရှိပါတယ်၊
ဒီပြသနာကို စတာဘယ်သူတွေလဲ၊ အပြစ်မဲ့တွေတဲ့လုပ်နေသေး၊ကျောက်ဆည်မှာဖြစ်တုံးကလဲ သူတို့စတာပဲ၊ ပြီးတော့ ဘာမှမဆိုင်ပဲ ဆွမ်းစားကြွတဲ့အပြစ်မဲ့ကျောက်သင်္ဘောဆရာတော်နဲ့ ကျေုာင်းသားလေးကို မွတ်ဆလင်တွေ လူအုပ်နဲ့ဝိုင်းဖမ်းပြီး ဓါးနဲ့ထိုးသတ် ရေမျှောခဲ့တာ ဗမာတွေ မေ့နေသလား၊ ရခိုင်မလေးကို လူအုပ်စုနဲ့မုဒိမ်းကျင့်၊ဓါးနဲ့အင်္ဂါတွေ လှီး၊ လည်ပင်းကိုဖြတ် သတ်ခံ ထားရတဲ့ ပုံတွေကိုမြင်ရင်ရော၊ဘယ်လိုခံစားရမလဲ၊ ကိုယ့်လည်ပင်းကိုပဲ ဓါးနဲ့ လှီးကြည့်ပါဦး၊မြင်တာကိုပဲ သနားလိုက်တာ မန့် မနေနဲ့၊
ဒီမွတ်စ်ကုလားတွေက ရှိ လို့ဘယ်လိုမှနိုင်ငံအတွက်မကောင်းတဲ့အကောင်တွေ၊ ကလိမ်ကျရမလား၊သူတို့ကလူများရင် ရန်စချင်သေး၊ ဒါ ဒုတိယအကြိမ်ပဲ၊
ဟိုတနေ့က သတင်းတပုဒ်မှာပဲနယ်စပ်မှာ ရွာထဲ ခိုးဝင်လာတဲ့ဘင်္ဂါလီ၃ယောက်ကို ရခိုင်ရွာလူကြီးတွေလိုက်ရင်း ပျောက်သွားတော့ အနားမှာရှိတဲ့ ဘင်္ဂါလီကိုမေးတာ၊အဲဒီလူကမဖြေတဲ့အပြင် လူကြီးတွေကို ဓါးနဲ့ခုတ်လွှတ်သတဲ့၊ ဘာသဘောလဲ။ ရခိုင်က ဝံသာနုစိတ်ဓါတ်နဲ့ ဒီလိုကာထားလို့ ဒီဘက်ကဗမာတွေခံသာနေတာ၊
ကချင်၊ကယား၊ကရင်၊ချင်း၊ဗမာ၊မွန်၊ရခိုင်၊ရှမ်း ဟာ ဟိုးကတဲက အတူနေခဲ့တဲ့ညီအကိုတွေပဲ၊ဘင်္ဂါလီက နိုင်ငံခြားသားပဲ၊ လက်သဲဆိတ် လက်ထိပ်နာ ကိုယ့်အချင်းချင်းယိုင်းပင်းမှ ပြည်ထောင်စုကြီးတည်မြဲမှာပေါ့၊အပြစ်ပဲကြည့်ပြီးကိုယ့်ညီကိုကိုယ်ထောင်းရင် စိတ်နာပြီးကွဲကုန်မှာပေါ့၊
ကုလားမနိုင် ရခိုင်မေးတဲ့၊မွတ်ဆလင် တွေကိုပြောချင်တာက အေးအေးနေတဲ့ညီအကိုတွေကို လာမစနဲ့၊ဒို့နိုင်ငံမှာနေချင်ရင် အေးအေးနေ၊
မဟုတ်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပြသနာကြီးလာနိုင်တယ်
ဥပဒေမဲ့ တိုင်မဟုတ်ခဲ့ရင်(၀၉၅၀ ၈၂၈၀၈)
အာဇာနည် တွေထဲမှာ အားလုံးပါကြပါတယ် သတိရကြမှာပါ။
ဂျာအေးသူ့အမေရိုက်တဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်ခဲ့ ရင် ကျွန်တော်တို့ သွားပြီဗျာ။
ဥပဒေမဲ့ တိုင်းပြည် မဟုက်ခဲ့ရင်
three colors ညီလေး တွေ့ချင်တယ်ကွာ
တောင်ဂုတ်တွင် မှုဆလင်ကုလားများ အသတ်ခံရခြင်းအပေါ်အလွန်တရာဝမ်းနည်းမိပါသည်။ တောင်ဂုတ်မှလာသောသတင်းများအရ ထိုမှုဆလင်ကုလားများသည် လူသတ်တရားခံများ ဆုတော်ငွေများပေးအပ်ရန် အရာရှိများလဘ်လာဘများ ပေးအပ်ရန် ရန်ကုန်မှာ ငွေထုပ်ထမ်းလာကြောင်း ၊ ထိုအကြောင်အား သံတွဲမြို့မှ တောင်ကုတ်သို့ အကြောင်းကြားရာ ယခင်ကတည်းက မသီတာထွေးအား ရက်စက်စွာသတ်ပစ်ခဲ့မှုအပေါ် ဒေါသထွက်နေသော လူအပ်ကြီး မပြုလုပ်သင့်သည်များကို ပြုလုပ်မိခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမှုဆလင်ကုလားများသည် မိမိဘာသာအရ တောင်ကုတ်အနီးတ၀ိုက်တွင် ၀တ်ပြုခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ကားအားတားပြီးမေးမြန်းရာတွင်လည်း သသနာလာပြူတာ စသည့်များပြောဆိုကြောင်း ၊ ထိုသို့ အခြေအငံပြောဆိုမှုများမှာ မိနစ် ၃၀ ခန့်လောက်ပင်ကြာကြောင်း၊ အနီးအနားရှိ စစ်သား ရဲသားများလည်း လူအုပ်အား ၀င်မထိန်းကြောင်းကြားသိရပါသည်။
တောင်ကုတ်မြို့သည်ကုလားအ၀င်မခံသောမြို့ဖြစ်ပါသည်။ မသီတာထွေးအား မဒိန်းကျင့်လျက် လူမဆန်သော သတ်ပြစ်ခဲ့မှုများ နှင်ပတ်သတ်လျက် လှုံဆော်စာများသည် လူထုကိုဒေါသထွက်စေသည်။ နောက်တစ်ခုမှာ ပြည်ပမှ ရိုဟိန်ဂျာဆိုသူကုလားများ၏ ရခိုင်ပြည်ရလိုမှုသတင်းများသည် တောင်ဂုတ်လူထုအား မှုဆလင်များ အမုန်းပွားစေပါသည်။ ယခု လူသေမှုတွင် ရိုဟိန်ဂျာဆိုသည့် ဘင်ဂလီကုလားများ ပယောဂမကင်းပါ……ယခုကဲ့လူထုသွေးပူနေချိန်တွင် ထိုဒေသသို့ မှုဆလင်များ ခရီးသွားခြင်းများရှောင်ရှားခဲ့သင့်သည်။
စတာက ရိုဟိန်ဂျာ… ပြဿနာဖြစ်ပြီးခံရတာ မြန်မာမှုဆလင်တွေ နှင့် ရခိုင်တွေ ဖြစ်နေပါသည်။ မြန်မာမှုဆလင်များနှင့် ရခိုင်လူမျိုးများပူပေါင်းလျက် ရိုဟိန်ဂျာဆိုသူများအား အပြစ်ပြတ်သုတ်သင်ရှင်းလင်းသင့်ပါကြောင်း……
မှုဆလင်ကုလား (၁၀) ယောက်အသတ်ခံရမှုအပေါ် ဓာတ်ပုံကိုင်ပြီးဆန္ဒပြလျှင် ရန်ကန်ုရောက်ရခိုင်များနှင့် မြန်မာမိတ်ဆွေးများပေါင်းလျက် မှုဆလင်ကုလားလက်ချက်ဖြင့် မရေတွက်နိုင်အောင် ရက်စက်စွာ အသတ်ခံခဲ့ရသော ရခိုင်လူမျိုး၊ ရဟန်း မိန့်မ ဓာတ်ပုံကောင်ဆောင်လျက်ဆန္ဒပြမည်ဖြစ်ကြောင် …